Global Voices teny Malagasy » Fanoratana anarana ho an’ireo Meksikana mpampiasa finday, miteraka ahiahy momba ny fiainana manokana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Jona 2021 3:24 GMT 1	 · Mpanoratra Jacobo Nájera Nandika (en) i Anthony Sutterman, avylavitra
Sokajy: Meksika, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sary an'i Kristin Hardwick tao amin'ny stocksnap,  sehatra ho an'ny daholobe.
Ny 16 Aprily, ho fananganana ny Rejisitra Nasiônalin'ireo Mpampiasa Finday (Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANAUT, amin'ny fiteny espaniôla), nolanian ‘ny Antenimeran-Doholon'ny Repoblika ao Meksika ary avy eo navoakany ny didy hitsivolana  iray manova ny lalàna meksikàna momba ny fifandraisan-davitra sy ny fandefasana onjampeo.
Midika io fa takiana amin'ireo rehetra mampiasa finday ao Meksika ny hanoratany ny karatra SIM any aminy miaraka amin'ireo rakitra manokana sy ‘biometriques’ momba azy, toy ny lavotondro sy ny endriky ny tarehy. Ho andraikitr'ireo mpandraharaha amin'ny telefaona kosa ny manangona sy mitantana ireny angondrakitrtra ireny. Vinavinaina hitentina 700 tapitrisa pesos , na 35,4 dolara amerikàna eo ho eo ny fananganana ilay rejisitra.
Ny fanamarinana ny antony nanaovana ireny fanovàna ny lalàna ireny, araka ny ambaran'ny antenimieran-doholona meksikàna, dia ny “fiarahana miasa amin'ireo andrimpanjakana mahefa amin'ny resaka fiarovana sy ny fitsaràna momba ireo olana mifandraika amin'ny fanaovana hetsika tsy ara-dalàna.” Tamin'ny 2019, notombanana ho 22,3 tapitrisa ireo olona niharan'ny  heloka bevava, araka ny angondrakitra nasiônaly. Ny fanatratrarana ny hisian'ny “fandriampahalemana sy fitoniana ” no iray isan'ny manandanja indrindra amin'ireo fampanantenana nataon'ny filoha meksikàna Andrés Manuel Lopez Obrador fony izy voafidy tamin'ny taona 2018.
Niraradraraka ny kiana nandritra ny dingana fampandaniana sy taorian'ny nankatoavana azy io. Ilay fikambanan'ny fiarahamonina sivily Network for the Defense of Digital Rights (Tambajotra Fiarovana ny Zo Nomerika), na R3D, dia nampitandrina  tany am-piandohana fa tsy misy mihitsy porofo hoe mandray anjara amin'ny fampihenana ny heloka bevava io rafitra io. Nolazain-dry zareo ihany koa fa ireny rafitra ireny dia mora ihoarana. Mandritra izany fotoana izany, hanitsakitsaka ireo zo fototra ihany koa ilay angondrakitra, toy ny fiainana manokana, ary mety hanohintohinia ny fitonian'ny isambatan'olona noho ny fisian'ny fahafahana miditra tsy nahazoana alàlana na ny fiporitsahan'ireo angondrakitra manokany. Tsindrian'ilay fikambanana fa mety hisy fiantraikany amin'ny ‘tsy mbola fahamelohan'ny olona’ io satria “ilay fanavaozana dia mametraka fa izay rehetra hetsika ara-dalàna natao tamin'ny alàlan'ny laharana telefaona finday iray [dia ho araikitra] amin'izay olona nisoratra anarana tao anatin'ny rejisitra,”  midika izany fa mila manaporofo ny olona hoe tsy izy no tomponandraikitra tamina halatra iray, na fisandohana , ohatra.
Sehatra iray ao amin'ny indostrian'ny fifandraisana elektrônika, ahitàna orinasa 1.000 , no nangataka tamin'ireo mpanao lalàna mba handà ilay tolodalàna . Tohankevitr'izy ireo ny hoe mety ho sarotra ny hanangana tahirin'angondrakitra iray anaty tontolo izay ny mpandraharaha tsirairay dia samy mampiasa teknolôjia samihafa ary mety hampihemotra be ny fampiasambola io hetsika io, fanampin'ny filazàna fa tsy hampihena mihitsy ny haavon'ny heloka bevava io.
Ao Meksika, raha misy ny fitomboan'ny fitokisana ny governemanta federaly, araka ny ambaran'ireo tarehimarika ofisialy , nitatitra ihany koa ry zareo Meksikàna fa 7,5 isanjato ny fitomboan'ny isan'ireo niharan'ny kolikoly, araka ny tatitra tamin'ny 2019 avy amin'ny National Survey on the Quality and Impact of the Government  (Fanarahamaso ny kalitao sy ny fiantraikan'ny asan'ny governemanta). Atahoran'ireo fikambanana ny hoe mety ho very ilay lisitra misy ny angondrakitra manokan'ny olona ary ho tonga eny am-pelatanan'ireo olona ratsy saina, ary dia vao mainka hitombo ny fahatsapàna tsy fandriampahalemana.
Marobe ireo tranga voarakitra tao Meksika hoe tsy vitan'ireo andrimpanjakana ny niaro ny angondrakitra manokan'ny olona , araka ny lazain'ny masoivoho federaly misahana ny fiarovana ny angondrakitra manokana'ny olona. Ny ohatra iray isan'ny akaiky indrindra dia ny Ministeran'ny Asam-Panjakana, izay namboraka torohay momba ireo mpiasam-bahoaka 830.000 ao amin'ny fitantanana federaly .
Tranga iray tsy misy hafa amin'izany no nitranga tao amin'ny sehatry ny fahasalamana. Tamin'ny 2018, 2,3 tapitrisa ireo angona momba ny fitsaboana klinika no niporitsaka avy ao amin'ny fanjakan'i Michoacán . Nofaritan'ireo manampahefana federaly fa ny orinasan-teknôlôjia Hova Health no “tena tomponandraikitra”. Mbola tao anatin'io sehatra io hatrany, tamin'ny 2020, nisy fanadihadiana lalina iray namoaka fa ny angondrakitra manokan'ireo marary nampiasain'ny Fanjakana dia azo nokarohana tamin'ny alàlan'ireo lohamilina fikarohana tety anaty aterineto .
Efa nandramana ny nanangana rejisitra toy izany tamin'ny 2006, ilay lazaina fa Rejisitra Nasiônalin'ireo Mpampiasa Finday (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, na RENAUT, amin'ny fiteny espaniôla). Roa volana fotsiny izy iny no niasa talohan'ny nampiatoana azy taorian'ny nisian'ny tatitra hoe natao hamidy ilay angondrakitra . Tamin'ny 2013, ny rejisitra momba ny fifidianana koa dia namidy tety anaty aterineto .
Nisy ireo olompirenena nitondra ny raharaha teny amin'ny fitsaràna nanoherana ny fananganana ilay rejisitry ny telafaona finday, saingy ny ankamaroan'ireny hetsika ireny dia nolavin'ireo  mpitsara. Ho an'ny Ivontoerana Nasiônaly ho an'ny Fangaraharàan, ny Fahafahana Mahazo Vaovao sy Fiarovana ny Angondrakitra Manokan'ny Olona (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales amin'ny fiteny espaniôla) indray kosa, dia nanapaka hevitra izy ny hitory noho ny tsy fisian'ny fanajàna Lalàm-panorenana  satria heveriny fa ilay rejisitra dia manitsakitsaka ny fiarovana ny angondrakitra manokan'ny olona sy ny fahafahana mahazo vaovao. Ny Ivontoerana Federaly momba ny Fifandraisandavitra (Instituto Federal de Telecomunicaciones, or IFT, amin'ny fiteny espaniôla) koa dia nanjohy ireny hetsika ireny, tamin'ny filazana fa  tsy afaka ny hanome fitaovana izy ho entina manangana sy mampihodina ilay rejisitra, satria tsy misy bolongam-bola nankatoavina, ary mety hanohintohina ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahafahana mahazo ireo tolotra fifandraisandavitra ihany koa io.
Ho an'ny hetsika #NoALPadrón  (#NoToTheRegistry) kosa indray, ahitàna fikambanana sôsialy miisa 10, dia nangatahany ny Kaomity Nasiônaly momba ny Zon'Olombelona (Comisión Nacional de Derechos Humanos, or CNDH, amin'ny fiteny espaniôla), fikambanana iray tsy miankina amin'ny fanjakana, mba hameno taratasy fanenjehana ho fanoherana ny tsy maha-araka ny Lalàm-panorenana an'ilay rejisitra. Namaly  anefa ilay Kaomity fa tsy miditra amin'izany izy fa hanao fanarahamaso fotsiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/06/09/152948/
 Sary an'i Kristin Hardwick tao amin'ny stocksnap,: https://stocksnap.io/photo/smartphone-screen-NHNRJKATX2
 didy hitsivolana: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616165&fecha=16/04/2021
 700 tapitrisa pesos: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Entre-en-vigor-el-padron-de-telefonia-movil-que-obliga-a-usuarios-a-entregar-datos-biometricos-20210417-0007.html
 22,3 tapitrisa ireo olona niharan'ny: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
 fandriampahalemana sy fitoniana: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/los-8-ejes-del-plan-nacional-de-seguridad-y-paz-de-amlo/
 dia nampitandrina: https://r3d.mx/wp-content/uploads/Ficha-PUTM-Senado.pdf
 “ilay fanavaozana dia mametraka fa izay rehetra hetsika ara-dalàna natao tamin'ny alàlan'ny laharana telefaona finday iray [dia ho araikitra] amin'izay olona nisoratra anarana tao anatin'ny rejisitra,”: https://twitter.com/R3Dmx/status/1395484505163567105
 orinasa 1.000: http://canieti.org/canieti/quienessomos.aspx
 handà ilay tolodalàna: http://www.canieti.org/comunicacion/noticias/vista/20-12-16/Pide_Canieti_a_Senado_rechazar_registro_de_celulares.aspx
 tarehimarika ofisialy: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5724
 National Survey on the Quality and Impact of the Government: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/encig2019_principales_resultados.pdf
 ny niaro ny angondrakitra manokan'ny olona: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Funcion-Publica-incumplio-con-la-ley-por-fuga-de-datos-personales-Inai-20201124-0082.html
 namboraka torohay momba ireo mpiasam-bahoaka 830.000 ao amin'ny fitantanana federaly: https://www.animalpolitico.com/2020/07/funcion-publica-datos-personales-empleados-gobierno/
 2,3 tapitrisa ireo angona momba ny fitsaboana klinika no niporitsaka avy ao amin'ny fanjakan'i Michoacán: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hova-Health-datos-personales-sensibles-a-la-vista-de-quien-sea-20180812-0020.html
 marary nampiasain'ny Fanjakana dia azo nokarohana tamin'ny alàlan'ireo lohamilina fikarohana tety anaty aterineto: https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-ISSSTE-vive-una-fuga-de-datos-sensibles-que-expone-la-salud-de-sus-usuarios-y...-no-hace-nada-20200818-0097.html
 natao hamidy ilay angondrakitra: https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/685120.html
 ny rejisitra momba ny fifidianana koa dia namidy tety anaty aterineto: https://es.globalvoices.org/2013/11/12/tambien-el-padron-electoral-mexicano-esta-a-la-venta/
 nolavin'ireo : https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/aumenta-a-140-el-numero-de-amparos-rechazados-contra-padron-de-telefonia-movil-panaut-6656715.html
 nanapaka hevitra izy ny hitory noho ny tsy fisian'ny fanajàna Lalàm-panorenana: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-139-21.pdf
 tamin'ny filazana fa: http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-pleno-del-ift-aprueba-interponer-controversia-constitucional-en-contra-de-diversas-disposiciones